တစ်ဦးတည်းသော ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ညီမလေး ရေးတဲ့ အစ်ကိုဖြစ်သူ ရေမွန့် အကြောင်း – Shwe Likes
တစ်ဦးတည်းသော ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ညီမလေး ရေးတဲ့ အစ်ကိုဖြစ်သူ ရေမွန့် အကြောင်း
G Shwe | June 24, 2021 | Celebrity | No Comments
မိသားစုထဲမှာ သားအကြီး မောင်နမ ၂ယောက်လုံးက မွေးလာကတည်းက အတောင်တဖက်စီ ပဲ့လာသူအချင်းချင်းမို့ ကိုယ့်ခံစားချက်သူနားလည်သလို သူ့ခံစားချက်တိုင်းလဲနားလည်ပေးတယ် ငယ်ငယ်ကဆို အမေသီချင်းထွက်ဆိုတိုင်း မထိန်းတတ်ထိန်းတတ်နဲ့ နို့ဘူးတွေဖျော် အနှီးတွေလဲနဲ့ ထိန်းလာပေးတဲ့ အကို
မိစုံဖစုံ နဲ့ကြီးပျင်းလာတာ မဟုတ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်မှာ အားကိုးစရာဆိုလို့ သူပဲရှိခဲ့တယ် အဖေလို အကိုလိုမျိူး ချစ်ရတဲ့သူ သံယောဇဉ်အရှိဆုံးသူပွဲလမ်းတွေ သွားချင်တဲ့အခါတိုင်း အမေ့ကိုခွင့်တောင်းပေးပီးအမြဲလိုက်ပို့ပေးတယ်အပြန်ကျရင်မေးတယ် “ပျော်လား ပြူးစိန် “ တဲ့ငါ့ညမက အမြဲစိတ်ဓာတ်ကျတတ်လို့ နင်ပျော်ဖို့အရေးကြီးတယ် ငါအားရင်လိုက်ပို့မယ်ဆိုပြီးပြောနေကျ
အမေနဲ့ရန်ဖြစ်တိုင်းလဲ ကားနဲ့လာလာခေါ်ထုတ်ပေးပီးစိတ်ပျော်အောင်ထားတယ် ဘာစားမလဲ ဘာလုပ်မလဲအကုန်နားလည်ပေးပီး နှစ်သိမ့်တတ်ဆုံးသူမို့ အခုချိန်ပိုခံစားရတယ်Covid အချိန်ကတည်းက အိမ်ကစီးပွားရေအဆင်မပြေလို့ သူပဲထောက်ပံ့ခဲ့တာ အိမ်လခ ဈေးဖိုးက အစ သူ့ဘက်က ဘယ်လောက်အဆင်ပြေပြေ မပြေပြေကိုယ်တွေကို ထုတ်မပြောဘူး
မရရအောင် ရှာဖွေပြီးလာပေးတတ်တဲ့သူ… Streamer လုပ်တုန်းကလဲ သူအရမ်းကြိုးစားတယ် နဂိုထဲက ဂိမ်းဆော့ရ ဝါသနာပါတဲ့သူမို့ သူနဲ့အဆင်ပြေတာပေါ့ တခါတလေတော့လဲ အရမ်းညည်းတယ်ပင်ပန်းလိုက်တာတဲ့…
ပျင်းလို့ဆော့တာမျိုး မဟုတ်ပဲ အလုပ်တခု အနေနဲ့လုပ်ရတော့ ညလဲမအိပ်ဖြစ် မျက်ရိုးတွေကိုက်နဲ့ အရမ်းပင်ပန်းရှာတယ် သနားလွန်းလို့ ဘပီရယ် အဲ့လောက်ကြီး အလုပ်တွေ ဖိမလုပ်ပါနဲ့နားပါဦးဆိုလဲ “အလုပ်လုပ်မှ ပိုက်ဆံရမှာ ကြိုးစားရမယ် “တဲ့အသက် 40 ပြည့်ရင် ဘုန်းကြီးဝတ်မယ်ဆိုပဲ ငါဘုန်းကြီးဝတ်သွားရင် ငါရှာထားသမျှအကုန်လုံးက နင်တို့အတွက်ပဲဆိုပီးပြောနေကြလူကြီး
သူ့အနွံတာ သူအနိုင်ကျင့်သမျှ အခံဆုံးကလဲ ကိုယ်ပဲရန်ဖြစ်တိုင်းလဲ သူအဆဲဆုံးပဲ သူပြောနေကျစကား “ငါက အကြီး ငါ့ကိုဆရာလာမလုပ်နဲ့ ” x)အမြဲတမ်း ရန်ဖြစ်ပြီးတိုင်း ပန်းစည်းကြီးယူလာပီးပါးကို လာနမ်းတယ် စိတ်မဆိုးနဲ့တော့ ပြူးစိန် ဆိုပီး အပြင်ထွက်ခါနီး တိုင်းလဲ အမေနဲ့ညမကို နမ်းပီးမှသွားတတ်တဲ့ သူမျိုးတနေ့ကို ဖုန်းတခေါက် ပုံမှန်မပြောဖြစ်ဘူးအမြဲ ချစ်တယ် ဆိုပြီး တဖွဖွမပြောဘူး
ဒါပေမယ့် သူအရမ်းချစ်တယ် ဆိုတာသိတယ်
ဘပီရေ…. ဘပီကြိုက်တဲ့ဟင်းလေးတွေ မီးမီးချက်ကျွေးချင်သေးတယ် ဘပီ အဝတ်တွေလဲ လျော်ပေးချင်သေးတယ် ဘပီ စိတ်ဆိုးလို့ အော်ဆဲတဲ့ အသံလေးလဲကြားချင်သေးတယ် ဘပီ နေမကောင်းတဲ့အခါတိုင်း ပြုစုပေးချင်သေးတယ် ဒီခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ ကာလကြီး ပြီးသွားရင် မိသားစုကို ဗုဒ္ဓဂါယာဘုရားဖူး လိုက်ပို့မယ်ဆို?
အခုဖြစ်နေတာတွေအားလုံးက တကယ်မဟုတ်ရင် သိပ်ကောင်းမယ် ဘပီချစ်တဲ့ ပြူးစိန်က ဘပီလောက် မသန်မာဘူး မရင့်ကျက်သေးဘူး ဘပီရေ ဘပီမရှိတဲ့နောက် ဘယ်လိုနည်းနဲ့ အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာလဲ မတွေးတတ်တော့ဘူး နေရာချင်းလဲပေးလို့ ရရင်သိပ်ကောင်းမယ် ဒီအချိန်မှာ အရာအားလုံးက ကိုယ့်တာဝန်ကျလာပီဆိုတော့ အမေ့အတွက် ပိုပိုးလေးအတွက် ကြိုးစားပြီးတော့ အသက်ဆက်ရှင်ရဦးမယ်
ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုခွန်အားမျိုးနဲ့ ဆက်ရပ်တည်ရမလဲဆိုတာ မသိဘူး
မီးမိးတို့ ငိုနေတာတွေ့ရင် ဘပီကော ဝမ်းနည်းနေမလား???
အတွေးပေါင်းစုံ ဝင်ပြီး ရူးတော့မယ်ဘပီရယ် အပြင်မှာရာသီဥတု သိပ်အေးတယ် ရင်ထဲမှာတော့ အတော်ပူလောင်နေတယ် မေကြီးအတွက်တော့ စိတ်ချနော် မီးမီးရှိတယ် သီချင်းလေးအတိုင်းပဲ
စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်သာ ချန်ခဲ့ ပါ သိပ်ချစ်တယ် ငါ့အကို .. LaPyaeKabyar
မိသားစုထဲမွာ သားအႀကီး ေမာင္နမ ၂ေယာက္လုံးက ေမြးလာကတည္းက အေတာင္တဖက္စီ ပဲ့လာသူအခ်င္းခ်င္းမို႔ ကိုယ့္ခံစားခ်က္သူနားလည္သလို သူ႕ခံစားခ်က္တိုင္းလဲနားလည္ေပးတယ္ ငယ္ငယ္ကဆို အေမသီခ်င္းထြက္ဆိုတိုင္း မထိန္းတတ္ထိန္းတတ္နဲ႕ နို႔ဘူးေတြေဖ်ာ္ အႏွီးေတြလဲနဲ႕ ထိန္းလာေပးတဲ့ အကို
မိစုံဖစုံ နဲ႕ႀကီးပ်င္းလာတာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ကိုယ့္မွာ အားကိုးစရာဆိုလို႔ သူပဲရွိခဲ့တယ္ အေဖလို အကိုလိုမ်ိဴး ခ်စ္ရတဲ့သူ သံေယာဇဥ္အရွိဆုံးသူပြဲလမ္းေတြ သြားခ်င္တဲ့အခါတိုင္း အေမ့ကိုခြင့္ေတာင္းေပးပီးအၿမဲလိုက္ပို႔ေပးတယ္အျပန္က်ရင္ေမးတယ္ “ေပ်ာ္လား ျပဴးစိန္ “ တဲ့ငါ့ညမက အၿမဲစိတ္ဓာတ္က်တတ္လို႔ နင္ေပ်ာ္ဖို႔အေရးႀကီးတယ္ ငါအားရင္လိုက္ပို႔မယ္ဆိုၿပီးေျပာေနက်
အေမနဲ႕ရန္ျဖစ္တိုင္းလဲ ကားနဲ႕လာလာေခၚထုတ္ေပးပီးစိတ္ေပ်ာ္ေအာင္ထားတယ္ ဘာစားမလဲ ဘာလုပ္မလဲအကုန္နားလည္ေပးပီး ႏွစ္သိမ့္တတ္ဆုံးသူမို႔ အခုခ်ိန္ပိုခံစားရတယ္Covid အခ်ိန္ကတည္းက အိမ္ကစီးပြားေရအဆင္မေျပလို႔ သူပဲေထာက္ပံ့ခဲ့တာ အိမ္လခ ေစ်းဖိုးက အစ သူ႕ဘက္က ဘယ္ေလာက္အဆင္ေျပေျပ မေျပေျပကိုယ္ေတြကို ထုတ္မေျပာဘူး
မရရေအာင္ ရွာေဖြၿပီးလာေပးတတ္တဲ့သူ… Streamer လုပ္တုန္းကလဲ သူအရမ္းႀကိဳးစားတယ္ နဂိုထဲက ဂိမ္းေဆာ့ရ ဝါသနာပါတဲ့သူမို႔ သူနဲ႕အဆင္ေျပတာေပါ့ တခါတေလေတာ့လဲ အရမ္းညည္းတယ္ပင္ပန္းလိုက္တာတဲ့…
ပ်င္းလို႔ေဆာ့တာမ်ိဳး မဟုတ္ပဲ အလုပ္တခု အေနနဲ႕လုပ္ရေတာ့ ညလဲမအိပ္ျဖစ္ မ်က္ရိုးေတြကိုက္နဲ႕ အရမ္းပင္ပန္းရွာတယ္ သနားလြန္းလို႔ ဘပီရယ္ အဲ့ေလာက္ႀကီး အလုပ္ေတြ ဖိမလုပ္ပါနဲ႕နားပါဦးဆိုလဲ “အလုပ္လုပ္မွ ပိုက္ဆံရမွာ ႀကိဳးစားရမယ္ “တဲ့အသက္ 40 ျပည့္ရင္ ဘုန္းႀကီးဝတ္မယ္ဆိုပဲ ငါဘုန္းႀကီးဝတ္သြားရင္ ငါရွာထားသမွ်အကုန္လုံးက နင္တို႔အတြက္ပဲဆိုပီးေျပာေနၾကလူႀကီး
သူ႕အႏြံတာ သူအနိုင္က်င့္သမွ် အခံဆုံးကလဲ ကိုယ္ပဲရန္ျဖစ္တိုင္းလဲ သူအဆဲဆုံးပဲ သူေျပာေနက်စကား “ငါက အႀကီး ငါ့ကိုဆရာလာမလုပ္နဲ႕ ” x)အၿမဲတမ္း ရန္ျဖစ္ၿပီးတိုင္း ပန္းစည္းႀကီးယူလာပီးပါးကို လာနမ္းတယ္ စိတ္မဆိုးနဲ႕ေတာ့ ျပဴးစိန္ ဆိုပီး အျပင္ထြက္ခါနီး တိုင္းလဲ အေမနဲ႕ညမကို နမ္းပီးမွသြားတတ္တဲ့ သူမ်ိဳးတေန႕ကို ဖုန္းတေခါက္ ပုံမွန္မေျပာျဖစ္ဘူးအၿမဲ ခ်စ္တယ္ ဆိုၿပီး တဖြဖြမေျပာဘူး
ဒါေပမယ့္ သူအရမ္းခ်စ္တယ္ ဆိုတာသိတယ္
ဘပီေရ…. ဘပီႀကိဳက္တဲ့ဟင္းေလးေတြ မီးမီးခ်က္ေကြၽးခ်င္ေသးတယ္ ဘပီ အဝတ္ေတြလဲ ေလ်ာ္ေပးခ်င္ေသးတယ္ ဘပီ စိတ္ဆိုးလို႔ ေအာ္ဆဲတဲ့ အသံေလးလဲၾကားခ်င္ေသးတယ္ ဘပီ ေနမေကာင္းတဲ့အခါတိုင္း ျပဳစုေပးခ်င္ေသးတယ္ ဒီခက္ခဲၾကမ္းတမ္းတဲ့ ကာလႀကီး ၿပီးသြားရင္ မိသားစုကို ဗုဒၶဂါယာဘုရားဖူး လိုက္ပို႔မယ္ဆို?
အခုျဖစ္ေနတာေတြအားလုံးက တကယ္မဟုတ္ရင္ သိပ္ေကာင္းမယ္ ဘပီခ်စ္တဲ့ ျပဴးစိန္က ဘပီေလာက္ မသန္မာဘူး မရင့္က်က္ေသးဘူး ဘပီေရ ဘပီမရွိတဲ့ေနာက္ ဘယ္လိုနည္းနဲ႕ အသက္ရွင္ရမလဲဆိုတာလဲ မေတြးတတ္ေတာ့ဘူး ေနရာခ်င္းလဲေပးလို႔ ရရင္သိပ္ေကာင္းမယ္ ဒီအခ်ိန္မွာ အရာအားလုံးက ကိုယ့္တာဝန္က်လာပီဆိုေတာ့ အေမ့အတြက္ ပိုပိုးေလးအတြက္ ႀကိဳးစားၿပီးေတာ့ အသက္ဆက္ရွင္ရဦးမယ္
ဒါေပမယ့္ ဘယ္လိုခြန္အားမ်ိဳးနဲ႕ ဆက္ရပ္တည္ရမလဲဆိုတာ မသိဘူး
မီးမိးတို႔ ငိုေနတာေတြ႕ရင္ ဘပီေကာ ဝမ္းနည္းေနမလား???
အေတြးေပါင္းစုံ ဝင္ၿပီး ႐ူးေတာ့မယ္ဘပီရယ္ အျပင္မွာရာသီဥတု သိပ္ေအးတယ္ ရင္ထဲမွာေတာ့ အေတာ္ပူေလာင္ေနတယ္ ေမႀကီးအတြက္ေတာ့ စိတ္ခ်ေနာ္ မီးမီးရွိတယ္ သီခ်င္းေလးအတိုင္းပဲ
စိတ္ေျဖာင့္ေျဖာင့္သာ ခ်န္ခဲ့ ပါ သိပ္ခ်စ္တယ္ ငါ့အက္ို .. LaPyaeKabyar
ဒီလို ဘဝမျိူးရောက် လာလိမ့်မယ်လို့ တစ်ခါမ မတွေးမိဘူး ဆိုတဲ့ ဟား(၅)ကောင်အဖွဲ့အသားများ
မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ကို ခန့်စည်သူ ဆောင်ရွက်မည် ဟုဆို
အစ်မတစ်ယောက် လို ချစ်ခင်ရတဲ့ ပိုပို အတွက် လိုအပ်တာလေးတွေ ပို့ပေးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ ချယ်ရီသင်း
ရေကြီးရေလျှံမှုတွေကြောင့် သွားလာရခက်ခဲနေတဲ့ အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ် အတွင်းက သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် ဆန်အိတ် (၁၀၀) သွားရောက် လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ နေဒွေး